Guddoomiye ku xigeenka 1aad ee Baarlamaanka Puntland oo sheegay in ardayda loo baahanyahay in cilmiga ay barteen ay dalka uga faa’iideeyaan – Kalfadhi
Guddoomiye ku xigeenka 1aad ee Baarlamaanka Puntland oo sheegay in ardayda loo baahanyahay in cilmiga ay barteen ay dalka uga faa’iideeyaan
September 17, 2020 Hassan Istiila
Guddoomiye ku xigeenka 1aad ee Golaha Wakiillada Dawladda Puntland AVV: Cabdicasiis Cabdullahi Cusmaan ayaa ka qayb galay Xafladda qalin-jabinta dufcaddii 14-aad Machadka Khadijah bint Khuwaylid ee Garoowe.
Ardayda qalin badaltay ayaa dhan 176 arday, kuwaas oo dhameystay waxbarashadda Machadka Khadijah bint Khuwaylid, Guddoomiye ku xigeenka ayaa waxaa kala qayb galay masuuliyiin ka tirsan Goleyaasha Dawladda Puntland.
Mudane Cabdicasiis, oo ka sheekeynayay muhiimada waxbarashada ayaa sheegay in waxbarasho ay asal u tahay wax walba. Loona baahanyahay in ardayda wixii ay barteen ay dalka ku celiyaan oo ay dalka uga faa’iideeyaan.
Guddoomiye ku xigeenka 1aad Golaha Wakiillada DPL AVV: Cabdicasiis Cabdullahi Cusmaan ayaa hambalyo iyo bogaadin u soo jeediyey ardayda qalin-jebisey, maamulka iyo macalimiinta Machadka Khadijah bint Khuwaylid iyo sidoo kale waalidiinta ku soo tabacday ardaydaasi.
Mahad Salaad “Heshiis kasta oo la gaaro dhanka Farmaajo kama fuli doono…”